Mendrika tehaka ny hetsika rehetra natao e ! Na dia be aza ny tsikera sy ny kiana dia tsy nety nosakanana ianao. Fa izao, miandry daholo amin’izay ny olona rehetra ny amin’izay tombontsoa hotatazany na kely aza. Ireo mpitarika sarety sy posy aloha hatonina voalohany fa ireo izao no tsy nampiasaina tamin’iny fampiderana ny tanàna nataonareo iny. Manantena kosa aloha izahay fa mba nandona tapany hahazo erany isika amin’iny an ! Sa tsy izany ? Sao mantsy dia hoe anio dia efa hiverina indray ilay fitohanan’ny fiara mampiteny ny moana, ny polisy milalao telefaonina, ny tatatra maimbo ... Marina fa kimaimaika ny fotodrafitrasa napetraka fa na izany aza tonga dia ravaina aloha fa mba hamafiso tsara ny hatsarany. Raha vao tsy izay mantsy no hataonareo dia hataonay mivaivay toy ny teo aloha indray ny tsikera. Mba katsaho indray izay hanaovanay fety sambatra sy izay hiadananay mandra-pialanareo teo e !